बिहान ६:०० बजे सम्मको अपडेट, कहाँ,कहाँ कुन दलले जिते?
हेर्नुहोस् कसले कहाँ जिते र कसको कहाँ अग्रता छ सूचीसहित प्रतिनिधि सभामा विजयी हुनेहरू नेकपा एमाले म्याग्दी- भुपेन्द्रबहादुर थापा (नेकपा एमाले)- २३ हजार ३०८ मत
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रसुवामा क्लिन स्वीप
रसुवा, मंसिर २३ नेपाली कांग्रेसले रसुवाबाट दोस्रो जीत हात पारेको छ। मंसिर १० गते सम्पन्न पहिलो चरण अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्यले १४ हजार ४ सय
मतगणना हुदैगर्दा पेट्रोल र ग्यासको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस् यस्तो छ नयाँ मूल्य
काठमाण्डौ मंसिर २३ .चुनाव सकिएलगत्तै इन्धनको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल आयल निगमले सबै प्रकारका इन्धनको
सवारी दुर्घटनामा ड्राइभर सहित दुई महिला म्यादी प्रहरीको मृत्यु
मकवानपुर÷महोत्तरी, २२ मंसिर मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिक–२ चुनियास्थित त्रिभुवन राजपथमा पालुङबाट हेटौंडातर्फ जाँदै गरेको ना.३ ख ५९१८ नम्बरको टिपर शुक्रबार सडकबाट करीव १ सय ५० मिटर तल खस्न
रसुवाको प्रदेशसभा ‘क’ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लामा विजयी
काठमाडौं । मंसिर २२ – रसुवाको प्रदेश सभा ‘क’ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धन तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रभात लामा विजयी भएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका
नुवाकोटको ताजा मतपरिणाम, बाम गठबन्धनले मतान्तर बढाँउदै
काठमाडौं । मंसिर २२ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतगणना नुवाकोटमा जारी रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा दुई निर्वाचन क्षेत्र र चार प्रदेश सभाका रहेको नुवाकोटमा
धादिङ काे पछिल्लाे अपडेट
काठमाडौं,मंसिर २२ धादिङ काे पछिल्लाे अपडेट धादिङ प्रतिनिधि सभा १ मा भुमी त्रिपाठी नेकपा एमाले १८४९९ विश्व अर्याल नेपाली का‍ग्रेस ८७७३ प्रदेश १ राजेन्द्र पाण्डे नेकपा एमाले १६१८३ मधुकुमार श्रेष्ठ नेपाली का‍ग्रेस ७४३१ प्रदेश
काठमाडौंमा मतगणना जारी, प्रारम्भीक मतपरिणाम धमाधम आँउदै, काठमाडौंका कुन क्षेत्रमा को अगाडी ?
काठमाडौं । मंसिर २२ । काठमाडौंको १० वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सुरु भएको छ । आज बिहान १० बजेबाट सुरु भएको मतगणनाका प्रारम्भीम मतपरिणाम आउन सुरु
यी हुन अहिलेसम्मका बिजयी भएका उम्मेदवार
काठमाडौं,मंसिर २२ । मुस्ताङबाट नेकपा एमालेका प्रेमप्रसाद तुलाचन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । तुलाचनले ३ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । उनका
काठमाडौं ५ को प्रारम्भीक मतपरिणाम सार्वजनीक, कस्ले कति मत पाए ?
काठमाडौं । मंसिर २२ । काठमाडौंको क्षेत्र नं ५ को प्रारम्भीक मतरिणाम सार्वजनीक भएको छ । जस अनुसार बाम गठबन्धनका उम्मेद्धवार इश्वर पोख्रेलले ६८० र नेपाली
अमेरिकी पत्रिकाको टिप्पणीः ‘नेपालको चुनाव भारत र चीनबीचको लडाई’
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपालको निर्वाचनबारे अमेरिकाको प्रभावशाली दैनिक पत्रिका द वाशिङटन पोस्टले नराम्रो टिप्पणी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको दोस्रो चरणको
नुवाकोटमा बाम गठबन्धनको अग्रता, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कस्ले कति मत पाए ?
काठमाडौं । मंसिर २२ । पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको नुवाकोटमा हिजो साँझ देखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतगणना जारी रहेको छ । नुवाकोटमा सुरुवातीका केहि बुथहरुमा
प्रतिनिधिसभा र्निवाचनमा नुवाकोट क्षेत्र नं १ मा डा. रामशरण महत र २ मा नारायण खतिवडाको अग्रता, कस्ले कति मत ल्याए ?
काठमाडौं । मंसिर २१ । पहिलो चरणमा मतदान सम्पन्न भएको नुवाकोटमा आज साँझ देखि मतगणना सुरु भएको छ । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नुवाकोट क्षेत्र नं
पहिलो चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतगणना जारी, अहिले सम्म कहाँ कस्ले कति मत पाए ?
गोरखा २ मा बाबुराम भट्टराईको अग्रता बाबुराम भट्टराई ८३० नारायणकाजी श्रेष्ठ ७६६ जाजरकोटमा वाम गठबन्धनको अग्रता शक्तिबहादुर बस्नेत (माओवादी) ११७१ राजीवविक्रम शाह (कांग्रेस) ८६२ सोलुखुम्बु प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको अग्रता माओवादी केन्द्रका हेमकुमार
नुवाकोट क्षेत्र नं १ र २ को प्रारम्भीक मतपरिणाम सार्वजनीक, १ मा काँग्रेसका उम्मेद्धवार डा. रामशरण महत र बाम गठबन्धनका उम्मेद्धवार हित बहादुर तामाङको मत बराबरी, नुवाकोटमा कस्ले कति मत पाए ?
काठमाडौं । मंसिर २१ । पहिलो चरणमा मतदान सम्पन्न भएको नुवाकोटमा आज साँझ देखि मतगणना सुरु भएको छ । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार २ सय मत
दोश्रो चरणको निर्वाचनमा ६७ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगद्धारा जानकारी, दुई मतदान केन्द्रमा पुन मतदान हुने
काठमाडौं । मंसिर २१ । दोस्रो चरणको लागि आज भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ६७ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
कडा सुरक्षाका बिच नुवाकोटमा मतगणना सुरु,
काठमाडौं । मंसिर २१ । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको नुवाकोट सहितका केहि जिल्लामा आज साँझबाट मतगणना सुरु भएको छ । कडा
काठमाण्डौ मंसिर २१ । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्ला मध्ये केहीमा आज साँझ पाँच बजे देखि मतगणना सुरु भएको छ ।
सुर्खेतमा ब्यापकरुपमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी परिचालन
सुर्खेतको बराह गाउँपालिकास्थित वडा नम्बर ३ मा रहेको भेरिमावि तरङ्गा मतदान केन्द्रका प्रमुखसहित २१ जनाको टोली स्थानीयवासीले कब्जामा लिएका छन् । मंगलबार राति ११ बजेतिर
एमाले कार्यकर्ताद्धारा बालकोटमा मतदानकेन्द्र नजिक तोडफोड
२०७४ मङ्सिर २१ , बालकोट(भक्तपुर)। भक्तपुर जिल्लाको बालकोट स्थित गणेश आधारभूत प्राथमिक विद्यालय मतदान केन्द्र नजिक एमालेका कार्यकर्ताहरुले सर्वसाधरणको घरमा ढुंगामुढा गरी घरको झ्याल
सर्लाही जिल्लाको एक मतदान केन्द्रमाचार राउण्ड हवाई फायर
कामाण्डौ, मंसिर २१, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाको फुलपरासी बुथमा नेपाली कांग्रेस र राजपा कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा तीन जना घाइते भएका छन् । काँग्रेस कार्यकर्ताको आक्रमणबाट राजपा कार्यकर्ता
धनकुटाको थलथले मदान केन्द्रमा लगातार ७ वटा बम पड्कियो
कामाण्डौ, मंसिर २१ धनकुटाको थलथले मदान केन्द्रमा लगातार ७ वटा बम पड्कियो, प्रहरी र मतदाताको भागा भाग धनकुटाको थलथले मतदान केन्द्रमा लगातार ७ वटा बम बिस्फोट भएका
काठमाडौँमा शक्तिशाली विस्फोट, मतदाता र सुरक्षाकर्मीको भागाभाग
कामाण्डौ, मंसिर २१ ,दोस्रो चरण निर्वाचन अन्र्तगत मतदान सुरु हुने वितिक्कै काठमाडौंको एक
दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतदान सुरु, काठमाडौंमा चिसोबढेकाले मतदाताको उपस्थीति कम
काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४५ जिल्लामा आज बिहान ७ बजेबाट मतदान सुरु भएको छ । दोस्रो चरणमा हुन लागेको यो निर्वाचनको मतदान साँझ ५
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न ठाउँबाट मतदान गर्दैछन् । अधिकांश नेताहरूले बिहान मतदान गर्ने समय तय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
Pages 564 : You are at page 483 of 564